I-Visa yaseIndiya ekwi-UK yabemi base-UK Visa | Eyona ndlela ilula yokufumana iVisa yaseNdiya kuBemi baseBritane
Eyona Visa ilula kubemi baseBritane ukuba beze eIndiya yi-eVisa yaseIndiya (ye-Visa yase-Indiya ekwi-Intanethi)
Yintoni inqubo yokufaka isicelo seVisa yamaIndiya kubahlali baseBritane?
Kwixa elidlulileyo bekukho inkqubo esekwe iphepha yokufaka isicelo seVisa yaseIndiya kubahlali base-UK. Oku ngoku kuhlaziywe kwinkqubo ye-intanethi engafuni ukuba naziphi na iifom zephepha ezizaliswe ngabemi baseBritane. Le nkqubo iyafumaneka kule webhusayithi https://www.www.india-visa-online.com. Urhulumente wase-India uvumela ukungena kubemi base-Bhritane ngeenjongo zokubona, ukhenketho, utyelelo kwezonyango, iintlanganiso zeshishini, i-yoga, iisemina, iindibano zocweyo, ukuthengisa kunye norhwebo, umsebenzi wokuzithandela kunye nolunye ushishino kurhulumente omtsha we-eVisa yaseIndiya. Abemi base-UK ngoku banokufumana i-visa kwaye bahlawule kwimali yabo yasekhaya eyi-British Pound Sterling okanye naziphi na iimali ezili-135 emhlabeni.
Abemi base-Bhritane / base-UK banokufumana iVisa yaseIndiya kwi-Intanethi ngendlela elula kakhulu. Inkqubo kukugcwalisa ngokulula ukugcwalisa ifom yesicelo seVisa ekwi-Intanethi. Yenza kunye nentlawulo ekwi-Intanethi. Nawuphi na ubungqina obongezelelweyo obufunekayo buyacelwa obunokuthunyelwa nge-imeyile kwiDesika yoNcedo lweVisa yaseIndiya okanye ulayishe kwi-intanethi kule webhusayithi I-Visa yaseIndiya.
Ngaba abahlali base-Bhritane kufuneka batyelele I-Ambassia yase-India okanye bafumane isitampu kwiPasipoti yokufumana i-eVisa yase-India (i-Indian Visa Online)?
Hayi, ikho akukho sidingo sokundwendwela i-ambassia yaseIndiya nakweliphi na inqanaba. Kwakhona, apho akukho mfuneko yokufumana isitampu kwipasipoti, okanye udliwano-ndlebe okanye ikhuriya yakho. Abemi base-UK kufuneka bagcine ikopi ye-PDF yeVisa yaseIndiya ye-elektroniki (eVisa India) nge-imeyile kubo.
Ngaba abemi base-UK kufuneka bahambise ipasipoti yabo okanye amaxwebhu axhasayo?
Akukho mfuneko yokuba abahlali base-UK batyelele kwindlu yozakuzo yaseIndiya okanye yeKhomishini ePhakamileyo yaseIndiya okanye nakwezinye iiofisi Urhulumente waseIndiya. Abemi base-UK bangafaka amaxwebhu axhasayo kwifom yesicelo seVisa yaseIndiya kule webhusayithi nokuba ikwi-intanethi ngekhonkco elithunyelweyo kwidilesi ye-imeyile okanye ngokuthumela amaxwebhu nge-imeyile IDesika yoNcedo lweVisa yaseIndiya. Amaxwebhu axhasa isicelo seVisa saseIndiya anokuthunyelwa nge-imeyile okanye alayishwe nakweyiphi na ifomathi yefayile enjengePDF / PNG okanye iJPG. Abemi base-UK banokujonga ukuba yeyiphi amaxwebhu ayimfuneko ukuxhasa isicelo seVisa saseIndiya. Amaxwebhu afunwa ngokuxhaphakileyo Ifoto yobuso kwaye Khuphela iposi yokundwendwela, zombini zingathathwa kwifowuni yakho okanye kwikhamera kwaye ikopi ethambileyo inokufakwa okanye ithunyelwe nge-imeyile.
Ngaba abahlali baseBritani beza eIndiya ngeenjongo zeShishini kwaye benze isicelo se-eVisa India kule webhusayithi?
Ewe, abahlali baseBritani banokuza ngokundwendwela ishishini kunye nabakhenkethi kunye nokhenketho lwe-Visa ye-elektroniki yaseIndiya (eVisa India Online).
Iihambo zeshishini zinokuba zezazo naziphi na iinjongo njengoko zichaziwe I-Visa yeshishini laseNdiya kwaye I-Visa yaseIndiya kubahambi ngeenyawo.
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba iziphumo zeVisa zigqitywe kubemi base-UK?
Emva kokuba abahlali base-UK beyigqibile ifomu yesicelo se-Visa yase-Indiya kubandakanya ukubonelela ngawo nawaphi na amaxwebhu axhasayo anjengokuthi Ipasipoti yaseBritane Skena ikopi kunye nokufota ngobuso emva koko abemi base-UK banokulindela isiphumo se-India Visa Application 3-4 yeentsuku zomsebenzi. Kwezinye iimeko, nangona kunjalo, kunokuthatha ukuya kwiintsuku ezisixhenxe zeshishini.
Ngawaphi amalungelo anelungelo leVisa yaseIndiya ye-elektroniki (eVisa India) yabemi base-UK kwaye zeziphi izithintelo okanye izithintelo?
Izibonelelo ze-Indian Visa Online ezifunyenwe ngombane (eVisa India) zezi zilandelayo:
I-Indiya iVisa kwi-Intanethi inokuthengwa kangangeminyaka emi-5 isiQinisekiso.
I-Visa yaseIndiya ekwi-Intanethi okanye i-eVisa yaseIndiya isebenza kuphela kumangenelo amaninzi.
I-eVisa India (India Visa kwi-Intanethi) inokusetyenziselwa ukungena okuqhubekayo ukuya kuthi ga kumhla we-180 (oku ikakhulu kulungiselelwe ilizwe elithile njengabemi baseBritane nabaseMelika, kwamanye amazwe ubuninzi bexesha lokuhlala eIndiya bunqunyelwe kwiintsuku ezingama-90).
Le eVisa India (India Visa kwi-Intanethi) isebenza kwizikhululo zeenqwelo moya ezingama-28 kunye nezibuko ezi-5 Amachweba okungena eIndiya e-eVisa.
Le eVisa India (India Visa ekwi-Intanethi) ivumela ukungena kulo naliphi na ilizwe okanye imimandla ye-Indiya yeIndiya.
Izithintelo zeIndiya iVisa kwi-Intanethi (eVisa India) zezi:
Le eVisa India (India Visa Online) ayisebenzi ekwenzeni ifilimu, ubuntatheli kunye nokusebenza eIndiya. I-eVisa India nayo ayivumeli umnini ukuba atyelele indawo ekhuselekileyo kunye neendawo ezikhuselekileyo zaseIndiya.
Loluphi olunye uqwalaselo ekufuneka uqaphele ukuba abahlali baseBritani bafika eIndiya kwiVisa yabakhenkethi okanye iVisa yeNdiya yaseIndiya?
Sukugqitha ngaphezuluKuya kufuneka wazi ukuba kufuneka uhloniphe imithetho yelizwe kwaye uphephe ukuhlala ngaphezulu. Kukho intlawulo yeedola ezingama-300 eIndiya ngokubambisa ngaphezulu ukuya kwiintsuku ezingama-90. Kwaye ukuya kwi-500 yeedola entle ngokuhlala ngaphezulu kweminyaka emi-2. URhulumente waseIndiya unokuthatha amanyathelo asemthethweni.
Unokuwucekisa umfanekiso wakho kwaye unokufumana ubunzima bokufumana i-visa kwamanye amazwe ngokuhlala eIndiya.
Thatha ukushicilelwa kwe-Visa yaseIndiya ukwamkelwa nge-imeyile: Ngelixa kungafuneki ukuba nekopi ephepheni ye-eVisa India (India Visa Online) kodwa kukhuselekile ukwenza njalo ngoba ifowuni inokonakala okanye ibhetri ingakhathaliswa kwaye ngekhe ukwazi ukubonelela ubungqina bokufumana i-Visa yase-Indiya ye-elektroniki (eVisa India). Ukuprintwa kwephepha kusebenza njengobungqinawesibini.
Ipasipoti enamaphepha ama-2Urhulumente wase-India akaze akucele ipaspoti kwaye uyakuhlala ekucela kuphela ikopi ye-scan / ifoto ye-biodata iphepha lepasipoti ngexesha lenkqubo ye-eVisa India (Indian Visa Online) ukuze singalazi inani lamaphepha angenanto kwipaspoti yakho. . Kuya kufuneka ukuba ube namaphepha amabini angenanto ukuze amagosa asemdeni weSebe lokufuduka akwazi ukunamathela kwisitampu sokungena kwaye aphume isitampu kwipasipoti yakho.
Ukuqinisekiswa kweenyanga ezi-6 zepasipoti: Ipaspoti yakho kufuneka ibe isemthethweni kangangeenyanga ezi-6 ngomhla wokungena eIndiya.
Abemi base-UK banokwandisa njani ukuhlala kwabo e-India?
Ukuba i-eVisa yakho yaseIndiya (ye-Indian Visa Online) iyaphelelwa, kuya kufuneka uyivuselele ngaphambi kokuphelelwa kwayo. I-eVisa India ngokwayo ayinokwandiswa kodwa i-eVisa India entsha (ye-Indian Visa Online) inokusetyenziswa ngaphambi kokupheliswa kwentsusa.
IDesika yoNcedo lweVisa yaseIndiya ikwinkonzo yakho yokuphendula kunye nokuphendula kuyo yonke ingcaciso kunye namathandabuzo onokuba unayo ngaphambi kotyelelo lwakho eIndiya. Siyaqonda ukuba ukuhamba kufuneka kungabikho kuxinzelelo kwaye kudale inkqubo endaweni yokwenza kube lula kubahambi bamanye amazwe ukuba bafumane iimpendulo kulwimi lwabo lwasekhaya. Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngayo nayiphi na imibuzo enxulumene nezokuhamba.
Uyacelwa ukuba uhlale unomdla malunga neemfuno zelizwe lakho ekhaya kule webhusayithi. Ifomu yesicelo seVisa yaseIndiya ungafayilishwa kwi-intanethi ukuvumela iintsuku ezine zeshishini kuhambo lwakho okanye uhambo lokuhamba.